तेस्रो राष्ट्रपतिको कार्यभार
एयर एशियाले बुझाएको साढे ११ करोड हरायो, १२ वटा चेक बाउन्स
रौतहटमा झडप, प्रहरीद्वारा हवाई फायर
३०० अक्षरको पत्रकारिता
बालबालिकाको प्रश्न- ‘मिस, गरीबको सपना पूरा हुन्छ कि हुँदैन?’
प्रहरीले नै गर्‍यो ड्रोनको दुरुपयोग
मन्ट्रियल महासन्धि लागू हुँदै- विमान दुर्घटना र लगेज हराउँदा पाइने क्षतिपूर्ति रकम बढ्यो
दुई वर्षमा पनि पाइएन वन विभागस्तरीय निर्णयको सूचना
सप्तरी आगलागीमा १३ घर जले (अपडेट)
नुवाकोट दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या १८ पुग्यो (अपडेट)
र्इपीएलबाट बाहिरिने पहिलो टोली बन्यो पोखरा
‘ए’ डिभिजन लिगमा मनाङको उपाधि यात्रा, आर्मी क्लब कमजोर
साधुको भेषमा अपराध
जनकपुरबाट पक्राउ पर्‍यो नक्कली नागरिकता बनाउने गिरोह
‘ब्लड मनी’ तिरेर साउदीबाट फर्किए झापाका प्रशान्त लिम्बू
सप्तरीमा आगलागी, नियन्त्रणको प्रयास जारी
मण्डलामा ‘उपियाँको निबन्ध’
'ए' डिभिजन फुटबल- पुलिसद्वारा फ्रेन्डस पराजित
रिपोर्टसोमवार, फाल्गुण २१, २०७४
अब बन्ने राष्ट्रपतिको प्रमुख चुनौती भनेकै सामान्यकालीन अवस्थामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु हो । जानकारहरूका अनुसार नयाँ राष्ट्रपतिलाई संक्रमणकालको नाममा संविधानमा व्यवस्था भए बाहेकको काम गर्ने छूट प्राप्त हुने छैन ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव । तस्वीरः बिक्रम राई
११ कात्तिक २०७२ मा व्यवस्थापिका–संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल नयाँ राष्ट्रपतिले पदभार सम्हालेलगत्तै समाप्त हुनेछ । निर्वाचन आयोगले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति चयन गर्ने निर्वाचन मिति २९ फागुनलाई तोकेको छ ।
आयोगले नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेर राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । निर्वाचन तालिका अनुसार संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले अपराह्न ३ बजेसम्ममा मतदान गरिसक्नेछन् ।
गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव ६ साउन २०६५ मा त्यही वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमै निर्वाचित भएका थिए । तीन जना राष्ट्रपति चयन त्यही भवनमा भएको निर्वाचनले गरे पनि उनीहरूले आफ्नो भूमिकामा फरकपन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
राजतन्त्रको अन्त्य र प्रथम राष्ट्रपति चयन हुँदाको समयमा मुलुकमा राजनीतिक उथलपुथल त थियो नै प्रक्रिया र पद्धतिमा समेत अन्योल थियो । प्रथम राष्ट्रपति डा. यादव बनिबनाउ संस्थाको नेतृत्व गर्न गएका थिएनन्, सबै कुराको जग बसाल्ने बेला थियो त्यो ।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका भनाइमा, पहिलो पटक जनताको छोरो राष्ट्रपति भएर आउँदा के होला ? कसो होला ? भन्ने आशंका थिए ।
पहिलो र दोस्रो राष्ट्रपति संक्रमणकालबाटै गुज्रेको देखिन्छ । यद्यपि, गणतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रक्रियाको नेतृत्व गरेका दुवै राष्ट्रपति शीतलनिवासको शान बढाउन सफल भए ।
दोस्रो संविधानसभाले ३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान जारी गरेको एक महीनापछि संसद्ले दोस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा विद्यादेवी भण्डारीलाई निर्वाचित गर्‍याे । उनी संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति भएकी थिइन् ।
मुलुकको पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि पनि संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने बाटो सहज भइसकेको थिएन । संविधान जारी भए पनि जनताबाट प्रत्यक्ष अनुमोदित भइसकेको थिएन र कार्यान्वयनका चुनौती बाँकी नै थिए ।
यसरी हेर्दा, पहिलो र दोस्रो राष्ट्रपति संक्रमणकालबाटै गुज्रेको देखिन्छ । यद्यपि, गणतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रक्रियाको नेतृत्व गरेका दुवै राष्ट्रपति शीतलनिवासको शान बढाउन सफल भए ।
कार्यपालिकाले भने राष्ट्रपतिको ओहदाको गरिमा अनुसार व्यवहार गर्न नसकेको सम्बद्धहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको हो, जे सिफारिश गरे पनि लालमोहर लागिहाल्छ भन्ने मानसिकता भने सिंहदरबारबाट धेरै पटक प्रदर्शन भयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीको २८ महीने कार्यकाल प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवको भन्दा निकै कम हो । अवधि छोटै भए पनि लैंगिक समावेशिता, वातावरण संरक्षण, नेपाली भाषाको सम्वद्र्धन, सांस्कृतिक निरन्तरता जस्ता विषयमा भण्डारीको विशेष योगदान रहेको जानकारहरू बताउँछन् । संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, “राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन र शैक्षिक क्षेत्रमा राष्ट्रपति भण्डारीले निकै रुचि देखाइन् ।”
महिलाको आर्थिक, सामाजिक सशक्तिकरण र विकासमा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न भण्डारीकै पहलमा ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ शुरू भयो ।
राष्ट्रनिर्माणको सबै तहमा महिलाको समान सहभागिता, सामाजिक सम्मान र सार्वभौमसत्ताको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित यो कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवामा पहुँच बढाउन, चेलीबेटी बेचबिखन र सामाजिक कुरीति तथा लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य गर्न केन्द्रित छ ।
कूटनीतिक क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेकी भण्डारीले दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने प्रयत्न गरेको जानकारहरू बताउँछन् । द्विपक्षीय वार्ताहरूमा उनले दोभाषे राखेर नेपालीमा बोल्दा संवाद प्रभावकारी भएको राष्ट्रपतिका सहयोगीहरू बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाली भाषामा सम्बोधन गरेर राष्ट्रपतिले राष्ट्रको गरिमा उच्च बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
संविधानमा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष, संविधानको संरक्षक र अभिभावकको रूपमा स्थापित गरिएको छ ।
वातावरण मन्त्री र रक्षा मन्त्रीको अनुभव पछि राष्ट्रपति निर्वाचित भण्डारीले भूकम्पपीडितको अवस्था, पुनःनिर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सम्पदा संरक्षण, विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालगायतका विषयमा चासो राखिन् ।
भूकम्पपछि शीतलनिवास भत्काउनुहुँदैन भन्ने विषयमा होस् वा पुरानो बसपार्कमा भ्यू टावर बनाउन नहुनेमा, उनले अडान लिएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोत बताउँछ । राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचनको वातावरण बनाउन संविधानमा असन्तुष्ट पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गरिन् ।
उनको कार्यकालमा चार जना प्रधानमन्त्री फेरिए । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा र राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्यको मनोनयनमा राष्ट्रपति भण्डारीले दलीय दबाब थेग्न नसकेको कतिपयको टिप्पणी छ ।
उनले सरकार अनुसार भिन्न व्यवहार प्रदर्शन गरेर संवैधानिक कर्तव्य बिर्सिएको आरोप पनि लाग्यो । त्यसो त प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवमाथि पनि तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल प्रकरणमा सरकारको सिफारिश कार्यान्वयन गर्न नमानेको आरोप लाग्यो ।
त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक अभीष्ट रोक्ने नाममा डा. यादवले राष्ट्रपतिको संवैधानिक गरिमा जोगाउन नसकेको संविधानविद्हरू बताउँछन् । यद्यपि, कठिन घडीमा राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नमा उनी सफल भए । संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, “भद्र व्यक्तित्वका धनी यादव लवाइखवाइ र व्यवहारमै अभिभावकको भूमिकामा देखिए ।”
संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन हुनु भनेको संविधान अनुमोदित भएर मुलुक सामान्यकालतर्फ जानु हो ।
विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य अहिलेसम्मका राष्ट्रपतिहरूले तत्कालीन अवस्था हेरेर निर्णयहरू लिएको बताउँछन् । “नयाँ राष्ट्रपतिको भूमिका त्योभन्दा पृथक् हुनुपर्छ” उनी भन्छन्, “अबका राष्ट्रपतिलाई संक्रमणकालको सुविधा प्राप्त हुने छैन ।”
१५ जेठ २०६५ मा गणतन्त्र स्थापना भएयता नेपाल राष्ट्रको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति हो । संविधानमा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष, संविधानको संरक्षक र अभिभावकको रूपमा स्थापित गरिएको छ ।
राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन, संविधानको पालना र संरक्षण राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो । सामान्यतया राष्ट्रपतिले गल्ती नै गर्दैन भन्ने परिकल्पना संविधानमा गरिएको छ । यसको अर्थ हो राष्ट्रपतिको भूमिका सार्वजनिक टीका–टिप्पणी वा आलोचनाको विषय बन्नुहुँदैन ।
संविधान वा संघीय कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश र सम्मतिबाट हुनुपर्नेछ ।
झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको समर्थनमा सरकार गठन भइसकेको छ । राष्ट्रपतिले जुनसुकै दलको भए पनि प्रधानमन्त्रीसँग विश्वासको सम्बन्ध बनाउँदै आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संविधानविद् डा. अधिकारी बताउँछन् ।
संविधान अनुसारका सबै संरचना बनिसकेकाले राष्ट्रपतिको ध्येय संविधान कार्यान्वयन होस् भन्नेमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य सामान्यकालको राष्ट्रपति भएकाले राजनीतिक भूमिका नदेखियोस् भन्नेतर्फ निकै सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् ।
नयाँ राष्ट्रपतिका हरेक गतिविधि अनुसरणीय हुनुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “संघीयताको अभ्यास भएपछिको पहिलो राष्ट्रपति ‘रोलमोडल’ बन्न सक्नुपर्छ ।”
संक्रमणका बेला जसरी ‘राजनीतिक हुने’ छुट छैन नयाँ राष्ट्रपतिलाई
शनिवार, मंसिर २९, २०७५ नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक शुरु
शनिवार, मंसिर २९, २०७५ एयर एशियाले बुझाएको साढे ११ करोड हरायो, १२ वटा चेक बाउन्स
शनिवार, मंसिर २९, २०७५ रौतहटमा झडप, प्रहरीद्वारा हवाई फायर
शनिवार, मंसिर २९, २०७५ सेल्फी खिच्दा फेवातालमा खसेका युवाको शव पाँच दिनपछि फेला
रिपोर्ट बालबालिकाको प्रश्न- ‘मिस, गरीबको सपना पूरा हुन्छ कि हुँदैन?’
समाचार भिसाको म्याद गुजारेर पोखरामा मजदूरी
टिप्पणी धरहराको पुनर्निर्माण कि नवनिर्माण ?
शुक्रवार, मंसिर २८, २०७५ मण्डलामा ‘उपियाँको निबन्ध’
बिहिवार, मंसिर २७, २०७५ मह जोडीको ‘दाल भात तरकारी’मा शिवम् सिमेन्टको सहकार्य
बुधवार, मंसिर २६, २०७५ मीटू प्रभाव, बलिउडका फिल्ममेकर साजिद खानमाथि कारबाही
मंगलवार, मंसिर २५, २०७५ ‘मरिसकेको मान्छे’लार्इ नेपाल पानोरमा बेस्ट डकुमेन्टरी अवार्ड